Labels: classic book 1 comments
Posted by ဝေနှောင်းလွင် at 3:26 AM
ရာဇမဏိစူဠာစေတီတော်ထီးတင်ရန် ထွက်တော်မူလျှင် ဧရာဝတီကို လှေတန်တားဖြင့် ကူးသင့် မသင့် သိလိုပါသည်
သက္ကရာဇ် ၁၀၁၁-ခု၊ ကဆုန်လ္ဆန်း ၁၁-ရက်၊ ၁-နွေနေ့၊ ရာဇမဏိစူဠာစေတီတော်ကြီး ရွှေထီးတင်မည် အခါတော်ရှိသည်။ ရေမြေရှင်လည်း ထွက်တော်မူကြီး ဓာတ် ၄-ရပ် အကျင်းအပအစီအရင်နှင့် ထွက်တော်မူမည်။ ဧရာဝတီကို လှေတန်တားဖြင့် ကူးပါမည်သင့်သည် မသင့်သည်ကို မိန့်တော်မူပါဆရာတော်။
ရည်မှန်နှင့် အောင်မြတ်ကို စေတော်မူသည်။Show/Hide
ဧရာဝတီမြစ်ကို လှေတန်တားဖြင့် ကူးတော်မူမည်။ အာဏာတော်ထား၍ စီရင်လျှင် မပြီးရှိမည်မဟုတ်။ ပြီးညားသော်လည်း လှေတန်တားဆိုသည်အရာသည် မြဲမြံလုံခဲလှသည်။ ရေမြေရှင် ကူးတော်မူစည်မကျ၊ ဘုရားမှာရှိစည် လေဆိုးလေရူးကျခဲ့လျှင် တန်တားမြောလေ၏၊ တန်တားပျက်လေ၏၊ ဆိုသောစကားသည် တက်သစ်သောနေမင်းကဲ့သို့ဖြစ်သော မင်းဧကရာဇ်သဘင်တော်၌ မဖြစ်လေကောင်း၊ လေဆိုသည့် အရာသည် ပြင်းစွာဖြစ်သောအခါ လှေဆိုသမျှသည် ရပ်နိုင်ခဲလှသည်။
ပဂံလှေသူကြီးတို့သည် အောက်အရပ်မှသည်အညာသို့ဆန်သောအခါ လေကာလဖြစ်၍ ကြိုးလွန် အတန်တန်သွယ်၍ ကျောက်ဆောင် ကမ်းပါး သစ်ပင်တို့၌ချည်းတည်း ဆွဲထား၍ လူးတားငင်မှ တက်နိုင်သည်။ လူးတားချင်းငင်စည်လေကျသည်များမှာ ကြိုးလွန်ပြတ်၍ မရပ်နိုင်သည် လှေများ အောက်သို့မြော၍ ပျက်စီးကုန်သည်၊ ရေမြေရှင်စီရင်သောလှေတန်တားသည် ကြိုးတည်ရမည်၊ ကျောက်ဆောင်ကမ်းပါးလည်း မရှိဖြစ်သည်။
ဘိုးတော်မင်းတရားသည် မြစ်ကိုလှေတန်တားဖြင့် ကူးတော်မူသည်ကား- ကျပ်ကိုသဘင်မောကစနုသဘင် နတော်ပြာသိုကာလဖြစ်သည်။ ထီးတော်တင်ထွက်တော်မူမည်မှာ နန်းတော်ကသည်မြစ်တိုင်ရုံ ဝေါတော် ပြဿဒ်စီး၍ ဘောင်တော်ရှည်က ဘောင်တော်ထွက်စံတော်မူလော့၊ ကရ၀ိတ်ငှက်တစုံစီရင်သော ဝေဇယန္တာပြဿဒ်ထက် မင်းမိဘုရားစံ၍ ရေသဘင်ဖြင့်ကူးတော်မူ၍ စစ်ကိုင်းမင်းလမ်း ဘောင်တော်ရှည်က ဝေါပြဿဒ်စီး၍ သဘင်နန်းတော်ရောက်စံတော်မူ- ထိုကမှပါပ သူရစ္စ အမြိတ္တ ကောလီဓာတ် မိ(တ်)ဘက်အစီရင်တို့ကို ကျင်းပ၍ မြင်းရထားစီးတော်မူ၍ ရွှေထီးတင်တော်မူလျှင် သင့်၏။
မြစ်ကို လှေတံတားဖြင့် ကူးတော်မူမည်ကို ဆရာတော်နှစ်မသက်ချေ။ လူကြီးရှင်ကြီးဟူရာတို့တွင်တို့သည် ရှင်ကြီးဖြစ်တော့သည်။ အတိဂမ္ဘီရဉာဏ်တော်သာ ပကတူပဖြစ်သည်၊ ဘုရားသခင်တရားတော်ဝယ်လည်း အစိန္တိတံပိ ဘ၀တိ စိန္တိတံပိ ၀ိနဿတိ ဟောတော်မူသည်။ ကြံ၍လည်း လောကဓမ္မမပြေလျှင် အကျိုးမရှိ၊ မကြံပဲပင်သော်လည်း လောကဓမ္မပြေ၍ အကျိုးရှိလျှင် ဆိုဘွယ်ရာမရှိ၊ ပညာရှိလက္ခဏာညီတော့သည်။ ဤသို့သောအရာတို့ကို သိအပ် မှတ်အပ်တော့သည် မဟာဓမ္မရာဇ်။ ။
Labels: classic book0comments
Posted by ဝေနှောင်းလွင် at 3:24 AM
မြို့နယ်စသည်တည်ရန် ဌာဝရကိန်းရောက်နှစ် တွက်နည်းကို သိလိုပါသည်။
ခမည်းတော်ဘ၀ရှင်မင်းတရားသည် သက္ကရာဇ် (၉၆၀)တွင် ဌာဝရကိန်းသင့်သည်၊ မြို့နန်းထီးကနက် ဆောက်စိုက်တော် မူသည်၊ ဌာဝရကိန်းကို မည်သို့တွက်သနည်း၊ ဌာဝရကိန်းသင့်သည်နှစ်က နှစ်မည်မျှရောက် ဌာဝရကိန်းဖြစ်ဦးမည်နည်း သိသာအောင် သွင်းတော်မူပါဆရာတော်။ ။
(သရက်ချိုစား၊ အင်းတပင်စားတို့ကို စေတော်မူသည်။)
သက္ကရာဇ် (၇၂၀)က ဌာဝရကိန်းဝင်စဖြစ်သည်။ ခြောက်ခုမြောက်၌ သတိုးမင်းဖျား ရတနာပူရမြို့နန်းကို ပြုစု တည်ထောင်၍ တိုင်းမှုပြည်ရေးတို့ကိုစီရင်၍ သာသနာကိုပြုစုတော်မူသည်။ ပဌမဌာဝရကိန်းက ဒုတိယဌာဝရ ကိန်းရောက်မည်ကား သင်္ချာအားဖြင့် ၂၄၀-ရောက်လျှင် ဌာဝရကိန်းတစ်ကြိမ်ကျသည်။ ထိုကောဇာသက္ကရာဇ် ကိုထုတ်၍ သုံထပ်ထားသည်။ အထက် ၁၂-ခုစားသေသကို မှတ်၍ထား၊ အလယ် ၃၀-စား သေသကို မှတ်၍ထား၊ အောက်ကို ၈၀-စား သေသကို မှတ်၍ထား ၃-ထပ်လုံးသေသတူစေ၊ မဏ္ဍိုင်ချား၍ သေသကို ၃-ထပ်ထားပြန်၊ အထက်ကို အလယ်နှင့်မြှောက်၊ အောက်သင်္ချာနှင့်မြှောက်ပြန်၊ ထိုသင်္ချာသည် မြို့သက်ဖြစ်၏။
ယခုပုဂန်မြို့ကို ပျဉ်ပြားမင်းတည်သည်၊ ထိုမင်းလက်ထက် သက္ကရာဇ်တို ၂၀၀-ပြည့်ရာတွင် ဌာဝရကိန်းဝင်စဖြစ်သည်။ အလောင်းစည်သူ နန်းတက်၍ ၁၀-မြောက် သက္ကရာဇ် (၄၆၀)တွင်တကြိမ် ဌာဝရမြို့နန်းတည်၍ စံတော်မူသည်။ သတိုးမင်းဖျားလက်ထက် ၇၂၀-တွင် ဌာဝရကိန်းရောက်စဖြစ်သည်။ ၇၆၂-ခု ရတနာပူရကို မြို့နန်းတည်သည်။ သက္ကရာဇ် (၉၆၀)တွင် ဌာဝရကိန်းဝင်စဖြစ်သည်။ ထိုသက္ကရာဇ် (၉၆၀) ၀ါခေါင်လဆန်း (၁၁)ရက် ၅-နေ့ မြို့နန်းမြေနန်း မြို့ဗဟိုစင် နာရီမောင်းမြေစနစ်၍ တည်ထောင်တော်မူသည်ကို နှလုံးသွင်း တော်မူအပ်သည် ရေမြေရှင်။ ။
(အရိယာလင်္ကာရဆရာတော်က ဟံသာဝတီစံနန်းတော်မှာ သွင်းသည်။)
Posted by ဝေနှောင်းလွင် at 3:22 AM
မည်သည့်အခါ သက္ကရာဇ်ဖြိုကိန်းရောက်ပါမည် သိလိုပါသည်။
ကောဇာသက္ကရာဇ်ကို ဘေးတော် မိုးညှင်းမင်းတရားဖြိုသောခါ သက္ကရာဇ် ဖြိုကျိန်းမသင့်သည်ကို ဖြိုမှားချေ၍ ကိုယ်တော်အကျိုးပင် ယိုယွင်းသောအရာတို့ကို ရှေးမှတ်ထားသည်စာများကို မှူးမတ်တို့က သွင်းသည်။ သက္ကရာဇ်ဖြိုသည်ကား အဘဲကျိန်းသင့်မှ ဖြိုသည်၊ သက္ကရာဇ်ကိုဖြိုသော ရေမြေ့ရှင်တို့မှာ အဘယ်သို့ အကျိုးခံရမည်၊ မဖြိုပဲနေ၍ သုံးဆောင်သော် အဖြစ်မည်သို့ရှိမည်ကို သိသာအောင် စာသွင်း တော်မူပါဆရာတော်။ ။
န၀စန္ဒဟူသောကိန်းကို ငါတို့မြတ်စွာဘုရားဘိုးတော်ဒေ၀ဒဟပြည်ကို အစိုးရသော မဟာအဉ္ဇနမင်းကြီးသည် (၈၆၄၂)ခုကို န၀စန္ဒဟူသောကိန်းဖြင့် (၈၆၄၀)ကန်ချေ၍ ကလိယုကသက္ကရာဇ် တို(၂)ခုထား၍ သုံးဆောင်သည်။ ထိုကလိယုကသက္ကရာဇ်တွင် အတာအဓိမတ်သင်္ချာ(၁၇၅)၊ မာသကိန်း (၂၅)၊ အ၀မာန် (၅၉၀)၊ ဟရဂုဏ်(၇၄၂)၊ ကြံမတ်(၄၂၇)၊ ဥစ္စဘို(၇၀၇)၊ လ-လွန်(၁)ရက်လွန်(၃)ကို သုံးဆောင်သည်။ အာလမ္ပိကကျိန်းမည်ကား ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၃၃၀) ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်သင်္ချာ (၂၅၁၂) ရောက်မှ ဖြိုကျိန်းကျချေသည်။ အတိမဇ္ဈံလဒ္ဓံဝိယကိန်းကား သာသနာတော်(၅၀၀၀)ကုံ၍ သင်္ချာသက္ကရာဇ် (၁၄၉၃၅၈၅၆၀)ရောက်မှဖြိုသော အစိုးရသောမင်းမြတ်တို့ ဖြိုအံ့သည်။
မိုးညှင်းမင်းတရားမှာ ကိန်းမကျပဲ ဖြိုချေသောကြောင့် ကောဇာသက္ကရာဇ်သင်္ချာကို ဖျက်သည်အပြစ်၊ ဘုရားရှင် သာသနာတော်ကို ဖျက်သည်မည်ချေသောကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ မိုးညှင်းမင်းတရားစည်းစိမ်သည် ကောဇာသက္ကရာဇ် (၈၀၁)ခုတွင် စဲချိန်ရောက်သောကံကိုမှီ၍ ဘုန်းတော်စဲသည်သာ ယူရမည်။ ဘုရားရှင် ဟောတော်မူသောအရာကား ကုသလာဓမ္မာ၊ အကုသလာဓမ္မာရှိလေပြီသည်။ ထိုကံသည် တိုက်တွန်းသောခါ ထိုအမှုကို ပြုမိချေသည်များကိုထောက်၍သာ သုံးပုံသောဗေဒင် အဋ္ဌကထာ ဋီကာအရ ကောက်များကိုထောက်၍ သိတော်မူအပ်သည် တရားမင်းမြတ်။ ။
(သက္ကရာဇ် ၉၇၀၊ နယုန်လ္ဆန်း ၅-ရက်နေ့၊ ဟံသာဝတီရွှေနန်းတော်မှာ စံတော်မူစည်သွင်းသည်။ မေတ္တာစာ ကိုလည်း ရေမြေရှင်က စေတော်မူသည်။ သာလှပင်စည်စား၊ သင်ပေါင်းကံစားတို့တွင် အရိယာလင်္ကာရ ဆရာတော်က သွင်းသည်။)
Posted by ဝေနှောင်းလွင် at 3:19 AM
ပထမ ဒုတိယ တတိယသင်္ဂါယနာတင်ချိန်တို့၌ ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားသည့်မြို့ရွာစာရင်းကို သိလိုပါသည်။
သက္ကရာဇ် ကလိယုဂအတို(၂)ခု၊ ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ ဝေဘာရတောင်ရင်း ဇရဲပင်ကြီးတွင် ပထမသင်္ဂါယနာတင်ရာတွင် သင်္ဂါယနာဝင်မြို့၊ သက္ကရာဇ် ကလိယုကအတို(၅၇)ခု၊ ဘုရားသိခင်သာသနာတော် (၁၀၀)ပြည့်တွင် ဝေသာလီပြည်၌ ဒုတိယသင်္ဂါယနာတင်ရာတွင် သင်္ဂါယနာမြို့ရွာ၊ ပါဒလိပုဗ္ဗပူရတွင် တတိယသင်္ဂါယနာတင်ရာတွင် သင်္ဂါယနာဝင်မြို့ရွာတို့ကို ဆရာတော်သာ သက်တော်ရွယ်တော် လျှောက်ပတ်သည်။ အတိဂမ္ဘီရ နက်နဲတော်မူသည်။ သိသာအောင် စာသွင်းတော်မူပါ ဆရာတော်။
(သက္ကရာဇ် ၉၇၀-ခု၊ နယုန်လဆန်း ၅-ရက်နေ့ ဟံသာဝတီရွှေနန်းတော်က ဆရာတော်အနုရုဒ္ဓါ ကျောင်းတော်သို့ ကန်သာယာစား၊ ကန်ပေါက်စားတို့ကို စေတော်မူသည်။)
ရာဇဂရဟပြည်၌ အဇာတသတ်မင်းကြီးသည် သက္ကရာဇ် ကလိယုကအတို(၂)ခု၊ ၀ါခေါင်လပြည့် ဝေဘာရတောင်ရင်း ဇရဲပင်ကြီး၌ ရှင်မဟာကဿပအမှူးရှိသောရဟန္တာ(၅၀၀)တို့ဖြင့် ပထမသင်္ဂါယနာ တင်ရာတွင် ပထမသင်္ဂါယနာဝင်မြို့တို့ကား သရေခေတ္တရာသည် သီရိခေတ္တရာမတိုင်း၊ ကေတုမတီကို ဇေယ၀ဍ္ဎဏတိုင်း၊ ဟံသာဝတီ (၃၂)မြို့၊ သုသိမနဂရ (၃၂)မြို့၊ မုတ္တမ (၃၂)မြို့၊ လူပြည်မြို့ရံနှင့် ကျိုင်းရုံကို မဟာနဂရတိုင်း၊ ယွန်းပြည်မြို့ရံ (၅)နှင့် စစ်မည်ကို ဟရိပဉ္စတိုင်း၊ ခုံပြည်မြို့ရံ (၁၂)နှင့် ကျိုင်းတုံကို ဇေယျမာရတိုင်း၊ မိုးနဲညောင်ရွှေသည် ကမ္ဗောစတိုင်း၊ မိုးမိတ်သီပေါသည် စိမ့်တိုင်းဟူ၍ ခွဲတော်မူသည်။
ထီးကိုးစင်းစော်ဘွားတို့ကိုကား = မိုးညင်း၊ မိုးကောင်း၊ မိုးမိတ်၊ မိုးနဲ၊ မိုးဗြဲ၊ ဗန်းမော်၊ သိန္နီ၊ အုန်းပေါင်း၊ သီပေါဟူ၍ ခွဲတော်မူ၏။ ကျိုင်းကိုးကျိုင်းကား = ကျိုင်းရုံ၊ ကျိုင်းတုံ၊ ကျိုင်းချိုင်၊ ကျိုင်းသည်၊ ကျိုင်းခေါင်၊ ကျိုင်းရဲ၊ ကျိုင်းလပ်၊ ကျိုင်းမယ်၊ ကျိုင်းအုပ် ခွဲတော်မူ၏။ မိုင်းကိုးမိုင်းကိုကား = မိုင်းကိုင်း၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းစိတ်၊ မိုင်းမတ်၊ မိုင်းပု၊ မိုင်းစင်၊ မိုင်းအင်၊ မိုင်းပွန်၊ မိုင်းလာ။
ထားကိုးစင်းကား = ထားပါလိုင်၊ ထားသေည်ညွတ်၊ ထားစကား၊ ထားသဲ၊ ထားဖျံ၊ ထားပ၊ ထားစင်၊ ထားအာယု၊ ထားပလု ခွဲတော်မူ၏။ သောဠသ ၁-ဆဲ့ ၆-တိုင်း၊ ပြည်ကြီး ၁၉-ပြည် ခွဲတော်မူ၏။ ဤကား ပထမသင်္ဂါယနာတင်မြို့ပေါင်း အရေအတွက် (၈၄၀၀၀)၊ အ၀င်အပါ ပထမသင်္ဂါယနာတင်မြို့၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ နိုင်ငံ၊ ကျေးသီးကျေးလက်တိုက်အ၀င်အပါကို သိတော်မူအပ်၏။
ဝေသာလီပြည်၌ ဒုတိယသင်္ဂါယနာဝင်မြို့၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ နိုင်ငံ (၈၄၀၀၀)၊ အ၀င်အပါကား ပါဒလိပုဗ္ဗပူရ၊ ပါဝါ၊ စေတုတ္တရာ၊ မိတ္ထိလာ၊ တက္ကသို၊ သံသုမာရဂီရိ၊ သာဝတ္ထိ၊ ပဒုန္န၊ ကပ္ပီလ၀တ်၊ ကောလိဟ၊ ဒေ၀ဒဟ၊ ဗာရာဏသီ၊ စမ္ပါနကို၊ ရာဇဂဟ၊ ဝေသာလီ၊ အင်္ဂတိုင်း၊ မဂဓတိုင်း၊ ဘဂ္ဂတိုင်း၊ မဒ္ဒတိုင်း၊ သိဉ္စိယတိုင်း၊ ကာသိတိုင်း၊ ဂုရုရာဇ်တိုင်း၊ သက္ကတိုင်း၊ ၀ဇ္ဇီတိုင်း၊ သီဟဠတိုင်း၊ မန္ဓာရတိုင်း၊ မဂ္ဂဓရာဇ်တိုင်း၊ ဇေတုရာဇ်တိုင်း၊ ၀ိဒေဟရာဇ်တိုင်း၊ သုနာပရန္တတိုင်း၊ တမ္ပဒီပတိုင်း၊ ကာသိကတိုင်းစသော (၁၆)တိုင်း တို့ကိုလည်းကောင်း။
နန္ဒပူရစစ်ကိုင်းကြီး၊ မဟာပြိုင်၊ ဥစ္စေနီ၊ တက်သချိုင်၊ ကူဆိပ်၊ ပြည်မြို့၊ ဒီပဲယင်းမြို့၊ ကေတုမြို့၊ ကလေးမြို့၊ သောင်သွတ်မြို့၊ တက်ခိုမြို့၊ တမ္ပ၀တီ၊ ပဲကူး၊ သရေခေတ္တရာ၊ ကေတုမတီ၊ မုတမော်၊ ကရန္န၀တီ၊ ကဿန၀တီ၊ ကိဉ္စိပူရ၊ သုသိမနဂရ၊ တရိယင်္ဂဒီပ၊ ဇေယာဝတီ၊ မင်းထုံန်မြို့၊ ထီးလေးစင်းမြို့၊ လောင်ရှည်မြို့၊ ယောမြို့၊ ကျိုင်းနော်မြို့၊ ကေတုမြို့၊ ကွန်ထောက်မြို့၊ စန္ဒမြို့၊ ပန်သာမြို့စသော ပထမသင်္ဂါယနာဝင် (၈၄၀၀၀)၊ ဒုတိယသင်္ဂါယနာဝင် (၈၄၀၀၀)။
တတိယသင်္ဂါယနာတင်သည်ကား = ဒေ၀ဒဟပြည်ကိုအစိုးရသော မဟာအဉ္ဇနမင်းကြီး ဖြိုသည်နောက်၊ သက္ကရာဇ် (၁၄၈)ခုကို အဇာတသတ်မင်းဖြို၍ အတိုကလိယုကထားသော သက္ကရာဇ် (၂)ခုပွား၍တက်သော သက္ကရာဇ်ကောဇာ (၁၇၅)ခု၊ ဘုရားသခင်သာသနာတော် (၂၁၈)နှစ်ရောက်၌ တတိယသင်္ဂါယနာ တင်ရာတွင် သင်္ဂါယနာတင်မြို့ (၈၄၀၀၀)အနက် ရေတွက်ခဲ့ပြီးသော ပထမသင်္ဂါယနာဝင်အတိုင်းမြို့ (၈၄၀၀၀)၊ သုံးလီပွားတက်သော မြို့ရွာကျေးလက်စသောအရာတွင် ထပ်၍ပွားသောအချက်ကား = ရေမြို့၊ ဒ၀ယ်မြို့၊ ၀ါဂရူမြို့၊ တနင်္သာရီမြို့၊ သာဂရမြို့၊ သရနတန်မြို့၊ သရတောင်မြို့၊ ရာမမင်းမြို့၊ အောင်စွပ်မျောက်မြို့၊ ပိဘီသနမျောက်မြို့၊ သုကျိပ်မျောက်မြို့၊ ပန်းထွားမြို့၊ ရတနာတင်းတိန်မြို့၊ ကျည်းမြို့၊ မြို့ကည်၊ ပစ္စနမြို့၊ စိမ်ပြည်၊ ကရင်ပြည်၊ သိမ်မြို့။
ပုဂံ၊ မြင်းစိုင်း၊ ပန်းရ၊ စစ်ကိုင်း၊ ပင်လယ်၊ လယ်ပြင်စည်၊ ယင်တော်၊ ၀တီ၊ ရန်အောင်မြို့၊ သစ်ကြက်သာမြို့၊ မြေထဲမြို့၊ မြင်ကွန်းမြို့၊ ကျွန်ဆုံမြို့၊ ပုံတောင်မြို့၊ ကူထွတ်မြို့၊ ဟင်းသတ၊ ဓနုဖြူ၊ သမြင်တုံ၊ စရွံ၊ ယင်းဧ၊ ဘအိုင်၊ ဒကယ်၊ ရေကင်မင်းကြီး၊ ပြည်မြို့၊ ဖျင်တမြို့၊ ပန်ထိန်မြို့၊ လယ်ကိုင်းမြို့၊ မလွန်မြို့၊ မကွေးမြို့၊ ၀က်မစွတ်မြို့၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ စကုမြို့၊ ပုခန်းငယ်မြို့၊ တလုပ်မြို့၊ ရွာပုကြီးမြို့၊ တပယ်မြို့၊ အမြင့်မြို့၊ ဗဒုံမြို့၊ ကန္နီမြို့၊ မင်းကင်းမြို့၊ ပန်လက်မြို့၊ သြာ်မော်တုံ၊ မော်ကယ်၊ ကြွေသမ္ဘရာ၊ ငှက်ပျော၊ ညောင်ပင်၊ ဆားကျင်း၊ ပင်းသာ၊ ငရနဲ၊ ခေါ်သတီ၊ စည်ပုတ္တရာ၊ စည်သာ၊ မုတ်ဆိုးဖိုစသော အရှေ့ဘက်တိုက်၊ အနောက်ဘက်တိုက်၊ တောင်ဘက်တိုက်၊ မြောက်ဘက်တိုက်၊ ဆင်ကြေးတိုက်၊ တွင်းသင်းတိုက်၊ မဟာဒါန်တိုက်။
လှော်ကားသုံးထောင်တိုက်၊ ကျွန်တော်သုံးထောင်တိုက်၊ ရွှေတိုက်-ငွေတိုက်၊ ကြေးတိုက်၊ ကန့်တိုက်၊ ယန်းတိုက်၊ ပန်းပွတ်တိုက်၊ မင်းခန်းတိုက်၊ ထီးဖြူတိုက်၊ ငပိတိုက်၊ ဆားတိုက်၊ ငြုပ်တိုက်၊ ဆင်စွယ်တိုက်၊ သကြားတိုက်၊ အသုံတိုက်၊ လက်ဆောင်တိုက်၊ လွှတ်၊ ရှေ့ရုံး။ နောက်ရုံး၊ ၀င်းရုံး၊ အတွင်းတောင်ရုံး၊ ပြင်တောင်ရုံး၊ တောင်တံခါး၊ ဆင် မြင်း အမြှောက်သ္နေတ် လွှား ကာ ဒိုင်းနီ ရွှေဒိုင်း လှော်ကား သက္ကဒါန် သမ္ပန် ကလောင် ကြော့လှေ ရွှေဘောင် ဘောင်နီ စပါးကျီ ဆန်ကျီ ဥယည်လယ်ယာ ကျွဲ နွား မြင်း ဆင် အခွန်အတုတ် အကောက်အစား တရားကွမ်းဘိုး ကျွဲ နွား မြင်းဝင် ဆင်သေ မြင်းမတ် ဆိပ်ပွဲတည်ကင်း ကုတို့ပို့၊ အရပ်ကွက်ဒိုင်း၊ ကိုရံလှေ၊ ရွှေလေ၊ ရွှေကာ၊ သ္နေတ်အမြောက်၊ မြို့တခါးအစောင့်၊ လွှတ်စောင့်၊ လွှတ်စေ၊ ရုံးစောင်၊့ ရုံးစေ၊ မြေနန်း မြဲစမြောင် တရင်ဘွားဘက်ကျော်ဒိုင်းတော်အစုစုသားတို့ကို ၀န်စာရေး အချုပ်အကိုင်နှင့် အမှုတော်ပေါ်ထွက်သမျှတို့ကို အရည်တိုက်သောံ၍ ရွေးကောက်ခန့်ထား တော်မူသော သုံးတန်သင်္ဂါယနာဝင် (၈၄၀၀၀)စီပွားသောအရာတွင် စဉ်းငယ်သိသာမူသာရုံ ဆရာတော် ကောက်နှုတ်၍ သွင်းအပ်သော မဟာဓမ္မရာဇ်။ ။
Posted by ဝေနှောင်းလွင် at 3:16 AM
တိုက်ခုနှစ်တိုက် နေရာဌာနအပိုင်းအခြားကို ရှင်းပါရန်။
မဇ္ဈိမဒေသဟူသော ပါဒလိပုဗ္ဗပူရကိုအစိုးရသောသီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးလက်ထက် မြို့၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ နိုင်ငံ နှင့်တကွအရေအတွက်(၈၄၀၀၀)ပွားရာက အကျည်းအားဖြင့်နှုတ်သော အရှေ့ဘက်တိုက်၊ အနောက်ဘက် တိုက်၊ တောင်ဘက်တိုက်၊ မြောက်ဘက်တိုက်ဝင် စချီစမြင် ကလံသံနှင့် မြေတိုင်းမြေထိန်းရှိသော မြို့ရွာတို့သည်ကား အဘယ်မျှ တတိုက်ဝယ်ဦးရေ မြို့ရွာရှိသနည်း။ တွင်းသင်းတိုက်၊ မဟာဒါန်တိုက်၊ ဆင်ကြေးတိုက်ဟူသော (၇)တိုက်၊ သရေခေတ္တရာ (၇)တိုက်၊ ဖျင်တ (၄)တိုက်၊ သန်လျင်ရှမ်း ရ-ရွာ၊ ပြည်မြို့ပေါက်ဟူ၍ ရှိသည်အရာများကို ရှေးပြုစုတည်ထားရင်းနှင့်တကွ သိချင်ပါသည်။ သိမှတ်သားအောင် စာသွင်းတော်မူပါဆရာတော်။ ။
(ထီးပေါင်းကားစား၊ တောင်ပြုန်းငယ်စားတို့ကို စေတော်မူသည်။)Show/Hide
သီရိဓမ္မာသောကမင်းသည် ကောဇာသက္ကရာဇ်တို (၁၇၅)ခု၊ ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့၊ တတိယသင်္ဂါယနာတွင် သင်္ဂါယနာဝင်မြို့ ၈၄၀၀၀၊ တိုင်း ခရိုင် နိုင်ငံ ကျေးသီးကျေးလက် တိုက်ဝင်ဟူသောအရာနှင့် ပြုစုတော်မူ သည်ကား အနောက်ဘက်တိုက်- ပုခန်းကြီး၊ မိတ္ထီလာ၊ ဆင်ယင်တရာမြို့ဆုံတား(.)၊ ပုဗ္ဗာထိပ်မြဲစေတုတ္တရာ၊ ဘောင်လင်း၊ ပြစ်သီး၊ လင်္ဂတော၊ ဆလင်းကြီးစသော အမြို့မြို့အရွာရွာအ၀င်အပါ ၁၀၀၀။
အရှေ့ဘက်တိုက်ကား = တောင်ပြုန်းကြီး၊ မတ္တရာ၊ မတဲ၊ ဆူးကား၊ ထီးပေါင်း(.)၊ တောင်သမန်၊ တောင်မြင့်၊ တောင်ကျည်း၊ တောင်ပြုန်းငယ်၊ အောင်ပင်လယ်စသော မြို့ရွာကျေးသီးအ၀င်အပါ ၁၀၀၀။ တောင်ဘက်တိုက်ကား = ပစ်မနား၊ မြစ်သားစောလှ၊ ပနံ၊ မြောင်လှ၊ မိတ္ထီလာ၊ ယင်းဘော်၊ မြင်းဆိုင်း။ မက္ခရာ၊ ပင်လယ်၊ ပင်တလဲ၊ လှိုင်းတက်၊ သာဂရ၊ ပင်း၊ နတ်မောက်စသောမြို့ရွာအရေအတွက် ၁၀၀၀။ မြောက်ဘက်တိုက်ကား = ငကင်း၊ (.)င်းရွာ၊ တလဲပါ၊ ကဲပါ၊ ပဲဟူ၊ ပဲတောင်၊ ပတတ်တိုင်၊ ပဒုံ၊ အမြင့်၊ ညောင်ကန်၊ တက်သချိုင်မြို့၊ ဒီပဲယင်း၊ နဂါးပေါ်၊ တည်တော၊ ဟင်းသာစသောမြို့ရွာကျေးသီး အရေအတွက် ၁၀၀၀။
တွင်းသင်းတိုက် ၁၀၀၀။ ဆင်ကြေးတိုက် ၁၀၀၀။ မဟာဒါန်တိုက် ၁၀၀၀။ ပြည် ၇-တိုက် ၇၀၀၀။ ဖျင်တ ၄-တိုက် ၄၀၀၀။ ပန်ဆီသွင်တိုက် ၁၀၀၀။ သန်လျင် ၇-ရွာ ၇၀၀၀။ စလင်းတိုက်၊ စကုတိုက်၊ မြေထဲတိုက်၊ မြင်ကွန်းတိုက်၊ မလွန်တိုက်၊ ကျွန်ဆုံတိုက်၊ မြို့လှတိုက်၊ မြို့တောင်တိုက်၊ ရွာပိန်တိုက်၊ ပေါင်းတည်တိုက်၊ အင်းမကြီးတိုက်၊ အင်းမငယ်တိုက်၊ ကျွန်ဆုံတိုက်စသော အရာတို့၌ တတိုက်လျှင် မြို့ရွာ ၁၀၀၀-စီ ဘွဲ့ဘက်တော်မူသောအရာတို့ကို မဇ္ဈိမာဒေသခွဲပုံစုများတွင်လာသည် မဟာဓမ္မရာဇ်။ ။
Posted by ဝေနှောင်းလွင် at 3:13 AM
အကျွန်းကျွန်း၌ နေကုန်သောကုန်သည်တို့သည် သင်းဘောကူး၍ တကာတော်နိုင်ငံအစွန်းဖြစ်သော တရိယင်္ဂဒီပသို့ သင်းဘောဆိုက်သည်။ တရိယင်္ဂဒီပသင်းဘောဆိပ်သည် ထင်ရှားစွာ ဘယ်ကာလက ဖြစ်သနည်း။ ဘေးတော်သတိုးမင်းဖျားကသည် ၁၉-ဆက်သောမင်းတို့ လက်ထက်တော်၌ ဖြစ်သလော၊ တရိယင်္ဂဒီပဟူသောအမည်သည် အဘယ်ကာလကပင်တွင်သနည်း။ တရိယင်္ဂဒီပအကြောင်းကို သိသာအောင် စာသွင်းတော်မူပါဆရာတော်။ ။
တရိယင်္ဂဆိပ်သည် မဇ္ဈိမဒေသအ၀င်မဟုတ်။ မဇ္ဈိမဒေသအ၀င်ကား အရှေ့ဂဇင်္ဂလအမည်ရှိသောနိဂုမ်း၊ အနောက်ဓုန္နမည်သောပုံဏားရွာ၊ မြောက်ဦသိရဒ္ဓဇ၊ တောင်ဒက္ခိဏ။ သလ္လာဝတီအမည်ရှိသော ချင်းတွင်းမြစ်၌ အင်ကြင်းပင်ကြီးဟူ၍ ကျမ်းဆိုသည်။ သမုဒ္ဒရာသည်ကား တ၀တည်း။ အမြို့မြို့သည်ကား အနားသို့ချည်း နေကုန်၏။ နောက်နောက်မြေပြင်ဝယ် နေကုန်၏။ မဇ္ဈိမဒေသဆိပ်ကား ၅၆-ဆိပ်ရှိ၏။ မြို့လည်း ကိုးသန်း၊ ကျေးလည်း ကိုးသိန်းဖြစ်သည်။ တရိယင်္ဂဆိပ်မှာ ဆိပ်ငယ်ဖြစ်သည်။ ဂန္ဓာရတိုင်း အစရှိသော အတိုင်းတိုင်းတို့၌ ၁၆-ရပ်၊ ပြည်ကြီး ၁၉-ပြည်တို့၌ ဆိပ် ၁၉-ရပ်နှင့် မကင်းမလွတ်ရှိကုန်သည်။ တရိယင်္ဂဒီပဆိပ်သည်ကား ဘုရားသိခင်ဆံတော်ဓာတ်ရောက်သောခါ တဖုဿ၊ ဘလ္လိကကုန်သည်ညီနောင်တို့စ၍ သင်းဘောဆိုက်သောအရာဖြစ်၍ တရိဂုမ္ဘမြို့၊ ရာမည၊ သုသိမနဂရ၊ သုဓမ္မ၀တီမြို့၊ ကရန္န၀တီမြို့၊ ကိဉ္စိပူရမြို့၊ အမြို့မြို့အရွာရွာက အရောင်းအ၀ယ်ကုံစလယ်ပြုသောဆိပ် ဖြစ်သည်။
မဟာဗောဓိမဏ္ဍိုင်၏ မြောက်ရာဇဂဟပြည်၊ ဝေသာလီပြည်၊ အရှေ့မြောက် ပါဒလိပုပ္ဗပူရပြည်၊ ပါဝါပြည်၊ အရှေ့စေတုတ္တရာပြည်၊ မတ္ထိလာပြည်၊ အရှေ့တောင်တက္ကသိုလ်ပြည်၊ သံသုမာရဂီရိပြည်များကသာ ကုလားတို့ သင်းဘောကုံနှင့်ရောက်သည်။ တောင် အနောက်တောင်ထောင့်၊ အနောက် အနောက်မြောက် ထောင့်ပြည်များက တရိယင်္ဂဒီပသို့မရောက်ချေ။ ပါဒလိပုပ္ဗပူရပြည်ကိုအစိုးရသော သီရိဓမ္မာသောကမင်းနှင့် သီဟိုဠ်ပြည်ကိုအစိုးရသော ဒေ၀ါနံပီယတိဿမင်းသည် အဒိဋ္ဌသဟာယကဖြစ်ကြ၍ မဟာမိတ် အထက္ခာရီပြု၍ သီဟိုဠ်ကသင်းဘောကူး၍ရောက်လျှင်၊ တရိယင်္ဂဒီပမှာဆိုက်၍ ပါဒလိပုပ္ဗပူရပြည်ကို တက်သည်။ (၇)ရက် ရောက်သည်၊ ကျမ်းဂန်ဆိုသည်။ သီဟိုဠ်ကျွန်းနှင့် တရိယင်္ဂဆိပ်သည် ၇-ရက်ကွာသည်ကို သိရသည်။ အစ၌ ဆိပ်ဖြူစသည် ကုလားတို့နေ၍ အရောင်းအ၀ယ်ပြုသည်။
နောက်တရိယင်္ဂဒီပမြို့ကို ကုလားတို့သင်္ဘောကူး၍ မြို့တည်မည်လာသောအခါ မွန်တို့ညာဏ်ထောက်၍ စီရင်နှင့်သောကြောင့် ကုလားတို့အပိုင်မတည်ရ၊ မွန်တို့ကပေးမှ တည်ရသောအကြောင်းများကိုလည်း ဆိုချေသည်။ ကုလားတို့ကတည်ရချေလျှင် ပိုင်မည်။ သင်္ဘောကူး၍ သီဟိုဠ်ကပိုင်သောအချက်သည် ဇမ္ဗူဒီပါတိုင်းဖြစ်မည်။ ဆိုထုံးကျမည်ကို သကြားစတုလောကပါလာတို့ပင် မြစ်ထာ၍ မွန်တို့က ကုလားတို့ကို ကန့်ကွက်တားမြစ်ရသော အရာရောက်သည်။
ဇမ္ဗူဒီပါကျွန်းကား ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းအ၀င်ဖြစ်မည်။ သီဟိုဠ်ကျွန်းကား ကျွန်းငယ်ငါးရာအ၀င်တွင်မှ ဇမ္ဗူဒီပါကျွန်းကြီး အရံအကာကျွန်းငယ်ဖြစ်သည်။ လာလတ္တံ့သော ထီးဆောင်းပြည်ထောင် နန်းနေမင်းတို့လက်ထက် တိုင် သမုဒ္ဒရာတဖက်ကသည် တဖက်သို့ကူး၍ မြို့တည်ရဘူးသည်၊ အစည်စကားဖြစ်မည်ကို မဖြစ်ရ။ မွန်မင်းတို့ကပင်ညာဏ်လောင်း၍ မြစ်တားရာတွင်မှ ကုလားတို့ကတောင်းလျှင် မွန်တို့ကပေးမှ တည်ရသည်များကို ထင်ရှားလို၍ မြန်မာဥစွန်းထွန်းရာ အ၀င်အပါ မင်္ဂလာသင်္ဘောဆိပ်ဖြစ်၍၊ တရိယင်္ဂဒီပအမည်ရှိသည့် အတိုင်းသာတွင်သည်။ အသစ်ပြု၍ မသမုတ်ချေ။ အမည်တွင်ထပ်၍တွင်သည်ကား သန်လျင်ကိုသန်လျင်ကင်းသာ တွင်သည်များကို နှလုံးသွင်းအပ်သည် မဟာဓမ္မရာဇ် ။ ။
(သက္ကရာဇ် ၉၇၀၊ ညောင်ရန်းမင်း သားတော်ဓမ္မရာဇာဓိပတိမင်းမြတ်သည် အနန္တဓဇဆရာတော်ကိုမေး၍ ဆရာတော်ကသွင်းသည့်စာတန်း)